ဂျပန် သံအမတ်ကြီး အီချီရို မာရုယာမားကို‌ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့က ‌တွေ့ရစဉ်
Photo: Nay Myo Htun/ RFA
ဂျပန်အာဏာရပါတီရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ မစ္စတာ ယာမာကူချီဟာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့နဲ့ ရန်ကုန်မှာ သီးခြားတွေ့ဆုံပြီးတော့ ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ၊ နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အရေးမှာ မြန်မာနဲ့အတူ ရပ်တည်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ ဂျပန်အသံအမတ်ကြီး အိချီရို မာရုယာမက ဒီကနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အနောက်ဥရောပနိုင်ငံနဲ့ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့က တပ်မတေ်ာရဲ့ ၂၀၁၇ ရှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်ရေးဟာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်လို့ ပြောဆိုနေကြတာရှိပါတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံနဲ့ နယ်သာလန်နိုင်ငံအစိုးရတို့ဆိုရင် တရားလို ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်ကနေ ထောက်ခံကြောင်းကို တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါ။ ဒါပေမဲ့ စီးပွားရေးမှာ အာရှကျားလို့ တင်စားလေ့ရှိတဲ့ ဂျပန်အစိုးရရဲ့ အမြင်ကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း မရှိတာကို ယုံကြည်နေတာကြောင့် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက နိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာတောင်းဆိုတဲ့ ကြားဖြတ်အစီအမံတစ်ခု ချမှတ်ရေးကိုမချမှတ်စေချင်ကြောင်း၊ နေ့တိုင်းလည်းဆုတောင်းနေကြောင်း ဂျပန်သံအမတ်ကြီးက ပြောပါတယ်။
ဂျပန်အစိုးရက အခုလို ပြောဆိုတာဟာ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီအတိုင်း ပြောဆိုတာလို့ ယူဆကြောင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုလို့ခေါ်ခေါ် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုလို့ခေါ်ခေါ် လူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိနေတဲ့အချက်ကတော့ ငြင်းလို့မရကြောင်း ညီမျှခြင်းမြန်မာရဲ့ ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မျိုးမင်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။
“အာဆီယံအပါအဝင် ဂျပန်နိုင်ငံတို့လို နိုင်ငံတော်တော်များများက မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းကို ပိုအားသန်ပြီးတော့ အပြင်အထန် ရှုတ်ချတဲ့ အစဉ်အလာ တစ်ခါမှ လုပ်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။ ဒီဟာကတော့ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီအတိုင်း ပြောဆိုတာလို့ ယူဆတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုလိုပဲ ခေါ်ခေါ်၊ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုလို့ ခေါ်ခေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု ရှိနေတဲ့အချက်တွေကတော့ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ အဲဒီဟာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ပုံစံပဲလုပ်လုပ်၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ ပုံစံပဲလုပ်လုပ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကို ရပ်တန့်ဖို့အတွက် နိုင်ငံတိုင်း ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်”
ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင် FFM က လူ ခုနစ်သိန်းမောင်းထုတ်မှု၊ လူထောင်ချီသတ်ဖြတ်မှု၊ ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးများ မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရမှု စတဲ့အချက်တွေကို ကိုးကားပြီးတော့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမြောက်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာအစိုးရဟာ ICJ၊ ICC နဲ့ အာဂျင်တီးနား ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွေမှာ တရားစွဲဆိုခံထားရပါတယ်။ မြန်မာကတော့ ICJ တစ်မှုတည်းကိုသာ ဖြေရှင်းနေတာရှိပါတယ်။
ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ ICJ တရားရုံးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်လျှောက်လဲခဲ့တာကို ချီးကျူးလေးစားကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ICJ မှာ ပြောဆိုခဲ့သလို မြန်မာအစိုးရက ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ICOE က ဆောင်ရွက်မယ့် နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာပါ တွေ့ရှိချက်အတိုင်း လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ဂျပန်သံအမတ်ကြီးက ပြောပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင် မုံရွာအောင်ရှင်(ခ)ဦးအောင်ရှင်ကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ ဂျပန်အစိုးရဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို တစ်လျှောက်လုံး အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ အစိုးရဖြစ်ပြီး ICJ အရေးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ ရပ်တည်ပေးတဲ့အတွက် ဝမ်းသာကြောင်းနဲ့ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးအတွက် ကောင်းတဲ့အလားအလာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ ဂျပန်အစိုးရက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအပေါ်မှာ တစ်လျှောက်လုံး အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ အစိုးရပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကို တကယ့်အကျပ်အတည်းဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာကိုပဲ ငွေကြေးအနေနဲ့ ထောက်ပံ့တာတွေရှိတယ်။ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီပေးနေတာတွေရှိတယ်။ အခုကျတော့ ထပ်ပြီး ICJ မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်သွားပြီးတော့ တရားရင်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စကိုလည်း သူက ထောက်ခံတယ်။ ဒီကိစ္စကို အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်ပြီးတော့ ပြောပြလာတာ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒါ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးအတွက် ကောင်းတဲ့အလားအလာလို့ ပြောချင်ပါတယ်”
တပ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါလည်း ဂျပန်အာဏာရပါတီ ကိုယ်စားလှယ်ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက ICOE ပါ အစီရင်ခံစာအတိုင်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူသွားမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံကလည်း အဲဒီအစီအစဉ်ကို ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သဘောထားမှတ်ချက်ကို တင်ပြဖို့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးချမ်းအေးကို RFA က ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့် ပြန်လည်ဖြေကြားတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ကနေ ၁၂ ရက်အထိ နယ်သာလန်နိုင်ငံ သည်ဟိဂ်မြို့ ICJ မှာ နှစ်ဖက်ကြားနာခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဂမ်ဘီယာတောင်းဆိုတဲ့ ကြားဖြတ်အစီအမံတစ်ခု Provisional measures မချမှတ်ဖို့ လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာအရေး မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ICJ ကြားဖြတ်အမိန့်ချမှတ်-youtube removed
ဂျပန်သံအမတ်ကြီး ပြောပြတဲ့ AA အကြောင်း
Japan is one country that has the highest moral and physical courage. War time was war time; like my poodle, cover the poop and move on! .
WE love Japan. You are welcome asafamily. We are honored to hear you speak Burmese. So are the Russians. We drink vodka with KIRIN beer asachaser, every Saturday. .
Jan 16, 2020 01:40 AM